Fitaovana fanodinana fitaovana - K-Tek Machining Co., Ltd.
K-Tek machining dia orinasa injenieran'ny subcontrakta voalohany, manamboatra singa marim-pototra & mivory mba hametahana fenitra manara-penitra, manerana ny indostria marobe manana lova tsara indrindra. Nanangana laza tsy manam-paharoa amin'ny famokarana asa ambony kalitao izahay, fanavaozana ara-tsindrimandry, vahaolana mahomby ary serivisy ho an'ny mpanjifa. Manambatra injeniera mahay sy za-draharaha amin'ny fitaovana avo lenta, fizotran'ny mari-pahaizana indostrialy, rafitra fitantanana mahia, ary fitaovana sy haitao farany haitao izahay.
Ao amin'ny milina K-Tek no tanjontsika dia ny hanampy ireo mpanjifanay hitombo. Ataontsika izany amin'ny fahafantarana fa ny ampahany rehetra amboarintsika dia manana kalitao avo indrindra misy eny an-tsena ankehitriny. Inona moa no tadiavinao fa ny vokatra farany anao no tsara indrindra eny an-tsena, sa tsy izany? Mifandraisa aminay mba hahitana izay azonay atao hanatsarana anao tsara kokoa. "Zava-dehibe amin'ny orinasantsika ny manana mpamatsy azo atokisana, azo antoka ary manam-pahalalana manohana antsika sy ny mpanjifanay."
Ny orinasanay dia afaka manamboatra ny famokarana karazana milina mazava tsara mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa, manana mpiasa 200 izahay izao. Ny vokatray manodidina ny 20% aondrana any Japon, 60% aondrana any Eropa sy Amerika, afaka manome anao kalitao avo sy vidiny mifaninana izahay. Ny fitaovana iraisanay dia vy vy, aliminioma, varahina, vy ambany karbaona, plastika injeniera ary karazana vy hafa, afaka manome fitsaboana hafanana sy fitsaboana isan-karazany ho an'ny mpanjifa koa izahay:
.Mba sary volo / peratra
. Rafitra fandrefesana mitsangana
Matoky izahay fa ny ekipanay dia manana ny fahaiza-manao sy ny fahaizana mizaha toetra sy mijery ny lafiny rehetra amin'ny famokarana injenieran'ny singa mba hahazoana antoka fa mitazona ny fenitra avo lenta araka ny fangatahan'ny mpanjifanay izahay. Ny sampana fanaraha-maso sy fitiliana dia manana fitaovana sy fomba fanaraha-maso kalitao isan-karazany hahatratrarana izany ary faly izahay mikarakara izay mason-tsivana sy fitsapana heverinao fa takiana.
Ny tanjontsika: Fanaterana ireo vokatra mahay manana kilema aotra ho an'ny mpanjifanay rehetra. Izahay dia mikasa ny hahatanteraka ny takiana rehetra amin'ny endrika rehetra. Mba hahatongavana amin'izany tanjona izany, ny orinasan'ny Machining CNC marina dia manatsara hatrany ny kalitaon'ny serivisinay rehetra ho an'ny mpanjifa ankehitriny sy ho avy. Izahay dia mampiasa ny loharano manan-danja indrindra-ny olontsika-mba hahafantatra sy hanatsara ny fizotrantsika isan'andro.
CMM: Ny milina fandrefesana ZEISS mifandraika dia voafehy amin'ny alàlan'ny CNC ary manara-maso ny fizahana azy amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ilay ampahany amin'ny alàlan'ny famotopotorana. Ity rafitra ity dia mandeha tsara rehefa manamarina ireo faritra lager sy endrika sarotra ao anatiny.